Naa mgbe ọtụtụ n'ime anyị nwere otutu dijitalụ ngwaọrụ iji na-eduzi anyị azụmahịa ma ọ bụ na nke anyị jikọọ na internet, iCloud enyere anyị aka ịnọgide ndị a ngwaọrụ synchronized. Na ndị ọzọ okwu iCloud bụ Apple si ojii nchekwa ọrụ nke dijitalụ data dị ka akwụkwọ, foto, na music na-echekwara na n'ime ime obodo sava n'ịhụ na onye ọrụ nwere zuru ohere data maka download ka iOS, Macintosh ma ọ bụ ndị ọzọ na Windows ngwaọrụ, nke ha nwere ike mgbe ịkọrọ na-eziga ka ndị ọrụ ndị ọzọ nakwa dị ka jikwaa ha Apple ngwaọrụ. Otu n'ime iCloud si isi atụmatụ bụ ikike ka mmekọrịta ma weghachi iPhone na iCloud.
Nzọụkwụ na-enyere iCloud ndabere na iPhone
1. Gịnị kwesịrị ime bụ jikọọ gị iPhone ka a Wi-Fi na netwọk.
2. The nzọụkwụ nke abụọ bụ pịa Ntọala> iCloud> ndabere ihe ọhụrụ ụdị; iOS 8 na mgbe e mesịrị ma ọ bụ pịa Ntọala> iCloud> Nchekwa & Ndabere maka okenye ụdị; iOS 7 ma ọ bụ tupu. Ọ dị mkpa ebe a iji jide n'aka na iCloud ndabere bụ maa n'ọrụ.
3. Ozugbo Back Up na agbanwuru Kpatụ Back elu Ugbu a. Jide n'aka na-anọ n'ọnụ gị Wi-Fi netwọk ruo mgbe usoro bụ 100% zuru ezu.
4. Iji jide n'aka na usoro bụ zuru ezu ego azụ elu site na ịme ọpịpị Ntọala> iCloud> Nchekwa> Jikwaa Nchekwa, na mgbe ahụ na-ahọpụta ndị ngwaọrụ nke oke. The kasị nso-nso azụ elu kwesịrị egosi na ndị nkọwa nke oge na nkwado ndabere size.
E wezụga aka-akwado ihe Ama na ngwaọrụ gị, iCloud na-akpaghị aka na-azọpụta ihe bụ ihe na ngwaọrụ gị otu ugboro n'ụbọchị mgbe gị na ngwaọrụ na-agbanwuru ha, na-ekpochi, na recharging. Ma Gịnị kpọmkwem ka iCloud azụ elu? The ozi na gị ngwaọrụ:
• Ịzụ akụkọ ihe mere eme na fim, egwú, ngwa ọdịnala, TV na-egosi, na akwụkwọ, Otú ọ dị, ọ na-adịghị azọpụta ọdịnaya ị zụta nanị ọmụma na ọdịnaya. Ọ bụrụ na ị mkpa iji weghachi gị zụọ, ị ibudata ya na-akpaghị aka site na "Store".
• Videos na Photos na gị iOS ngwaọrụ
• ngwaọrụ ntọala
• Ngwa data
• Olee otú gị Home ihuenyo na ngwa na-haziri
• Gị iMessages, odide (SMS), na MMS ozi
• Họpụtara Ringtones
• Anya oziolu
• Home-Kit nhazi
Weghachi si iCloud na-eji dochie nile dị na data.
Iweghachi data si iCloud nwere ike ịbụ karịsịa bara uru mgbe ịzụrụ a ngwaọrụ ọhụrụ na nke ị chọrọ iji nweta gị data si gị aga na ngwaọrụ. Ọ nwekwara ike ịbụ bara uru mgbe Iweghachi factory nrụpụta ekwentị.
Iweghachi data a na-eme dị ka otú ahụ:
1. On gị iOS ngwaọrụ, pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Software Update na-eso onscreen ntuziaka.
2. N'ihi na ihe iOS 8 ngwaọrụ: Gaa Ntọala> iCloud> Nchekwa> Jikwaa Nchekwa> ngwaọrụ (e depụtara n'okpuru Backups). N'ihi na ihe iOS 7 ngwaọrụ: Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere> Jikwaa Nchekwa, họrọ a ngwaọrụ e depụtara n'okpuru Backups.
3. Find Mbido nnyemaaka> Kpatụ Melite ngwaọrụ gị> Weghachi ndabere> banye na iCloud.
4. Ozugbo bịanyere aka na "Họrọ ndabere," site na ndepụta nke dịnụ azụ-acha ọkụ, na e echekwara na iCloud.
5. The iPhone ga-amalite na-eweghachiri na ọ ga-na-ewe nkeji ole na ole.
6. Ke ngwaọrụ gị malitegharia, ntọala na akaụntụ nwere na-weghachiri eweghachi na ndabere ga-amalite mgbe nbudata gị zụrụ music ngwa ,, TV na-egosi, Igwefoto Roll, akwụkwọ, na ndị ọzọ na ọdịnaya e weghachiri eweghachi kpamkpam.
Selectively weghachi faịlụ site iCloud
Atọpụ data itịbe site n'oge ruo n'oge na ka anyị nile maara adịkwa mkpa data nwere ike ịbụ akpasu iwe na ala ma ọ bụ na kasị bụrụ dịruru ná njọ-agbalị ibibi mgbe ọ na-abịa azụmahịa ozi metụtara. Na, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị nwere furu efu mkpa data anyị ka agbasaghị echekwa ndị a na anyị na ama ma ọ bụ mobile ngwaọrụ enweghị na-eche echiche nke repercussions adịkwa dị otú ahụ Ama ga-eweta.
Ọ bụ ezie na ị pụrụ iweghachi gị ngwaọrụ site na iCloud ndabere na-faịlụ azụ, ị ga-efu nile dị na data na ekwentị gị n'oge zuru ezu na-eweghachiri. Nke a bụ ebe Wondershare Dr.Fone maka iOS abịa na. Ị nwere ike ịhọrọ selectively naghachi faịlụ site na iCloud ndabere, na-enweghị adịkwa ẹdude data na ekwentị.
1. Mgbe mmalite Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị, họrọ "naputa site na iCloud ndabere faịlụ" mode. Tinye iCloud akaụntụ na paswọọdụ nbanye.
2. Mgbe ị abanye na gị iCloud, usoro ihe omume ga-depụta niile na metụtara ndabere faịlụ na a na akaụntụ. Họrọ onye ị na-aga na-agbake faịlụ site na pịa Download.
3. Na popup window, ị nwere ike họrọ faịlụ na ụdị ị ga-achọ ka download. Wee pịa na iṅomi.
4. Ozugbo Doppler na dechara, ị nwere ike ihuchalu faịlụ ị ga-achọ naghachi. Tinye akà rà na ihe ị chọrọ iji naghachi na pịa Naghachi bọtịnụ.
Ugbu a kọntaktị, ozi na ndetu pụrụ ozugbo natara gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụrụ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka jikọọ na kọmputa gị na eriri USB n'oge mgbake usoro.
> Resource> iCloud> Mfe nzọụkwụ ka mmekọrịta na weghachite iPhone na iCloud